Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Delta amaliteghachila ụgbọ elu Atlanta-San José na-akwụsịghị akwụsị
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Njikọ ejikọghachi na ọdụ ụgbọ elu ụwa kacha mma na -akwalite ohere zuru ụwa ọnụ maka ọdụ ụgbọ elu Silicon Valley.
Ụgbọ elu nke abalị na -apụ na San José na 10:55 PM (PST), rute n'Atlanta ihe dị ka awa 4.5 ka e mesịrị na 6:30 ụtụtụ.
Delta Air Lines ga-eji ụgbọ elu Boeing 757 mee njem ụgbọ elu San José-Atlanta.
Delta Air Lines kwụsịtụrụ ọrụ n'etiti SJC na ATL na 2020 n'ihi ọrịa COVID-19.
Malite n'abalị a, ndị njem ga -enwe ohere na ịdị mfe karịa mgbe ha na -efe efe site na San José ruo Atlanta. Ndị ọrụ gọọmentị na Ọdụ ụgbọ elu Norman Y. Mineta San José (SJC) mara ọkwa taa na ọrụ anaghị akwụsị akwụsị kwa ụbọchị Ọdụ ụgbọ elu Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) malitegharịa Delta Air Lines na mgbede a.
Ụgbọ elu nke abalị na -apụ na San José na elekere 10:55 PM (PST) n'ụgbọ elu Boeing 757, rute n'Atlanta ihe dị ka awa 4.5 mgbe e mesịrị na 6:30 AM (EST).
Ndị na-ahụ maka ọdụ ụgbọ elu na-egosi na okporo ụzọ siri ike n'oge ọkọchị, ụgbọ elu na-alọta, na imepe ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ ahịa, na inye ohere na-egosi nkwụsi ike maka SJC na ndị mmekọ azụmahịa ya. Ọ bụ ezie na Steeti California wepụrụ ụfọdụ ihe COVID-19 chọrọ, a ka chọrọ ndị njem iyi mkpuchi ihu, ọdụ ụgbọ elu na-aga n'ihu na-agba ume ịdị na-elekọta mmadụ.
John Aitken, onye isi na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Mineta San José kwuru, "Ọrụ ịlaghachi n'Atlanta na -anọchite anya ihe dị mkpa na mgbake njem." “Ọ bụ mbilite n'ọnwụ Delta nke abụọ n'ime ọtụtụ izu, ha emeela nnukwu ọrụ nke ịhazi na iweghachi ahịa ndị dị mkpa na ọnụ ọgụgụ ndị njem na-abawanye. Hartsfield-Jackson Atlanta International bụ ọdụ ụgbọ elu kacha ekwo ekwo n'ụwa, obi dịkwa anyị ụtọ ijikọ ma obodo Atlanta na netwọkụ ebe ọ na-erute. "
Atlanta laghachiri n'akwụkwọ ọrụ ikuku Delta na SJC mgbe ịmaliteghachi ọrụ na-akwụsịghị akwụsị na Minneapolis-St. Paul (MSP) sitere na SJC na Julaị 19. Delta Air Lines kwụsịtụrụ ọrụ n'etiti SJC na ATL na 2020 n'ihi ọrịa COVID-19 na mgbada njem metụtara.